Hlanganisa imephu kunye neetafile ze-Excel - ii-Geofumadas
NgoDisemba, 2009 ArcGIS-ESRI, GIS asibonise
Ndifuna ukudibanisa itafile ye-Excel, kwimephu kwifom ye-shp. Itafile iya kuguqulwa, ngoko andifuni ukuyiguqulela kwifom ye-dbf, okanye ayibeke ngaphakathi kwi-geodatabase. Umsebenzi omhle bulala ukuphumla kweli liholide kunye nesinyathelo sokugcina iso kwi-ArcGIS 9.3 kwi-Acer Aspire One.
Umzekelo ndiya kusebenzisa idatha ehlinzekwe xyzmap, usebenzise inkululeko yokuzivakalisa inkululeko ngenxa yokuba banesisombululo esihle kwi-ArcGIS kunye neGoogle Maps ukulayisha umboniso njengomgca.
1. xyzmap inikeza ibalazwe lehlabathi kwifom yefayile yefomathi, kunye ne-dbf equle iikholomu ezimbini: enye nekhodi yelizwe kunye nelinye negama.
2. Kwakhona ifaka iFayile ye-Excel eneenkcukacha zeenkcukacha zamazwe, kunye nekholamu enekhowudi yelizwe.
Injongo kukudibanisa itafile ye-Excel kwimephu, ngaphandle, ukuze uqhubeke usebenza nayo ngelixa unako ukwenza ukuqhutyelwa kwemisebenzi kunye nokuxhaswa kwemephu kwimephu.
Isisombululo kwiimpawu ze-3
Ndiza kusebenzisa i-Manifold GIS, kwaye ke ndiya kuzama nge-ArcGIS 9.3
1. Layisha imephu
Ifayile> yokungenisa> ukudweba
2. Biza itafile
Ifayile> iqhagamshelo> itafile
Ngoku ngoku, ndibonise itafile ehambelana nemephu, kwaye:
Emva koko ulwalamano olutsha lukhethiweyo kwaye amasimi adibeneyo aya kukhethwa
Emva koko le nkqubo ivumela ukukhetha iikholomu ezifunwayo ukuba zibonakala. Kwaye ngoku, iitafile zidibene kwaye unokubona kwi-grey ezo zivela kwitheyibhile yangaphandle. Yenza utshintsho kwi-Excel kwaye ufuna ukufumana izibuyekezo ze-3manda kwiqhosha lokunene kwitafile uze ukhethe Vuselela idatha.
Akufanele kube nzima, kodwa ngoku usebenzisa isixhobo Yongeza u Hlangano, akwenzi okokuqala kwisinyathelo sokuqala. Umyalezo uthunyelwe yi-console kukuba i-Excel itafile idinga i-ID ye-Object.
Abahlobo ba xyzmap Bacebisa ukuba badlulise ii-xls ukuya kwi-dbf, kodwa akusiyo injongo yokusebenza. Ukuba umntu usinceda, siya kwenza okulungileyo kuluntu.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Aulasca, ezininzi izibonelelo ze-GIS zamahhala
Post Next Lo ngumthumo wam wokugqibelaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-5 "Hlanganisa imephu kunye neetafile ze-Excel"
iimephu ze-ephemeral uthi:
Ndiyabona, ndifuna ukwenza imephu kwiimephu zeGoogle ezinokujonga uluntu kwaye ziya kuthululela khona idatha kwi-survey ndiyibeka kwiifomu zeGoogle. Ndakwazi ukugqithisa iifomu zeGoogle zefomu ukugqwesa kwaye ukusuka apho zithenge njengetafile kwiimephu zeGoogle. Umba kukuba, njengoko uphando luphendulwa, i-spreadsheet e-Excel edibeneyo igqityiwe, kodwa i-Google maps ayifuni. Ngaba ikhona na indlela yokufumana imephu ehlaziywe ngexesha langempela? Ngokuqinisekileyo, mbulela kakhulu nasiphi na isandla ongasinika sona!
Ngaba unakho ngokucacileyo ngakumbi nceda
Jair AO uthi:
Kodwa njengoko ngeza ifayile Excel njenge umaleko ukuba awukwazi ukubona ukusuka ArcCatalog aze ongeze umthombo wondibamba kwifayile umthi ayisebenzi kungakhathaliseki kufuneka ukuguqukela DBF, kwaye asebenzise i-Excel 2007 entsha Ngaba Unokurekhoda ngqo DBF.
Ndiyabulela uJosé, izimvo zakho zinceda kakhulu
UJosé Paredes uthi:
In ArcGIS uyakwazi kudibanisa itafile Excel, kodwa kufuneka uvule ngqo ngokungathi omnye umaleko ... (oku kuyinyaniso nazo zonke iifayile zokubhaliweyo akhawulwe).
Emva kokuba unayo kwi-MXD, yenza ujoyina, kodwa ngaphandle kokusebenzisa ibhokisi lebhokisi, kodwa ukusuka kwinqhosha lasekunene lomgca ofuna ukuludibanisa nalo.
Emva kokuba unxulumene nalo, unokutshintsha ifayela lakho le-XLS ukusuka phezulu kwaye utshintsho luya kubonakaliswa kwiimpawu zeemephu ezihambelanayo, ekugqibeleni uza kufuneka uyibuyisele kwakhona ...